#White #Card #Campaign #၏ #သဘောထား ကြေညာချက် #မနက်ဖန် ၆ – ၂ – ၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ | democracy for burma
#White #Card #Campaign #၏ #သဘောထား ကြေညာချက် #မနက်ဖန် ၆ – ၂ – ၂၀၁၄ နေ့လည် ၂ နာရီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
tags: '82 Citizenship Law, စာအမှတ်-၁/ယမပ/၂၀၁၅, န့လည် ၂ နာရီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ, ၆ - ၂ -, ၏ သဘောထား ကြေညာချက်, Burma, Constitution, Foreigner, Government, Myanmar, WCC, White Card Campaign
“ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် မဲပေးခွင့် ပယ်ဖျက်ရေး (White Card Campaign) ၏ သဘောထား ကြေညာချက်”
ရက်စွဲ။ ။ ၅-၂-၂၀၁၅
၁။ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအား မဲပေးခွင့်ပြုမည်ဟူသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်အား ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လုံးဝလက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိပါ
၂။ ပြည်ထောင်စုအရေးကိစ္စတွင် နိုင်ငံသားဟု သက်သေခံနိုင်ခြင်း မရှိသူတို့၏ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတွင်သာမက နောင်လာမည့် မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲမျိုးတွင်မဆို လုံးဝ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်မပြုရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
၃။ အဆိုပါ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (White Card) မဲပေးခွင့် ပျယ်ဖျက်ရေးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အဖြေရှာသွား မည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း၍ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း မရှိပါက ပြည်ထောင်စု အဝှမ်း ကန့်ကွက်လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် မဲပေးခွင့် ပယ်ဖျက်ရေးကော်မတီ
(White Card Campaign)
၆ – ၂ – ၂၀၁၄
နေ့လည် ၂ နာရီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
← !! #TNLA #မြန်မာစစ်တပ်မှ #တအာင်းရွာသားတစ်ဦးအား #ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်
#update #MOI #NNER #ဒီမိုကရေစီပညာရေး #သပိတ်စစ်ကြောင်း #သည် #၆. ၂. ၁၅ #Irrawaddy #Marching #Naung Done →